DeFi နွေရာသီ 3.0? Uniswap သည် အခကြေးငွေဖြင့် Ethereum ကို ကျော်တက်သည်၊ DeFi သည် စွမ်းဆောင်ရည်ထက် သာလွန်သည်။ - Token Myanmar
Decentralized exchange (DEX) Uniswap သည် ခုနစ်ရက်ကြာ အလှည့်ကျပျမ်းမျှထက် အခကြေးငွေဖြင့် ၎င်း၏အိမ်ရှင် blockchain Ethereum ကို ကျော်တက်သွားခဲ့သည်။
မြင့်တက်မှုသည် လက်ရှိဝက်ဝံဈေးကွက်အတွင်း DeFi အတွက် ဝယ်လိုအား မြင့်မားသော လတ်တလော အရှိန်အဟုန်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပေါ်လာသည်။ AAVE နှင့် Synthetix ကဲ့သို့သော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးစနစ် (DeFi) ပလပ်ဖောင်းများသည် လွန်ခဲ့သည့် ခုနှစ်ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရသည့် အခကြေးငွေများ မြင့်တက်လာသော်လည်း ၎င်းတို့၏ မူရင်းတိုကင်များ၊ နှင့် Compound (COMP) ကဲ့သို့သော အခြားအရာများသည်လည်း စျေးနှုန်းတက်လာပါသည်။
Crypto Fees မှ အချက်အလက်များအရ Uniswap ရှိ ကုန်သည်များသည် ဇွန်လ 15 နှင့် 21 ခုနှစ်ကြားတွင် ပျမ်းမျှနေ့စဉ် အခကြေးငွေ စုစုပေါင်း $4.87 သန်းဖိုးရှိပြီး Ethereum အသုံးပြုသူများထံမှ ပျမ်းမျှအခကြေးငွေများထက် $4.58 သန်းကျော်ရှိသည်။
Uniswap ၏အဆင့်မြင့်ဆုံး V3 ပရိုတိုကော (Ethereum mainnet ပေါ်အခြေခံ၍) သည် စုစုပေါင်းအခကြေးငွေ၏ ခြင်္သေ့ဝေစုအတွက် $4.4 သန်းရှိပြီး V2 မျိုးကွဲသည်လည်း ထင်ရှားသော $336,556 လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဤကာလအတွင်း Ethereum ၏ စုစုပေါင်းအခကြေးငွေသည် ခုနစ်ရက်အတွင်း Uniswap ၏ထက်သာလွန်သည်။ အမြင့်ဆုံးအခကြေးငွေထုတ်ပေးသည့်နေ့၏စည်းကမ်းချက်များအရ Uniswap သည် ဇွန်လ 15 ရက်နေ့တွင် $8.36 million ဖြင့် ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်ခဲ့ပြီး ထိုနေ့တွင် Ethereum ကို $7.99 သန်းဖြင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ပေးဆောင်ရမည့် ထိပ်တန်းအခကြေးငွေ- Crypto Fees
Uniswap သည် ကုန်သွယ်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ဗဟိုအခွင့်အာဏာမရှိဘဲ Ethereum-based တိုကင်များ လဲလှယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ၎င်းကို အလိုအလျောက် စမတ်စာချုပ်များဖြင့် အောင်မြင်သည်။ Uniswap ၏ အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင်၊ DEX တွင် အခကြေးငွေ၏ 100% ရရှိသော ငွေဖြစ်လွယ်သောဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား အခကြေးငွေများပေးဆောင်သည်။
ဆက်စပ်- Uniswap သည် volume တွင် $1T ကို ချိုးဖျက်သည် — သို့သော် လိပ်စာ 3.9 သန်းကိုသာ အသုံးပြုထားသည်။
Ethereum သည် DeFi အများစု၏အိမ်ဖြစ်သော blockchain ဖြစ်သည်၊ ၎င်း၏စျေးကြီးသောအခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်လူသိများသည်၊ Uniswap ကဲ့သို့သော DEX သည်တစ်ပတ်အတွင်း blockchain ကိုအခကြေးငွေဖြင့်အနိုင်ယူခြင်းသည်ထင်ရှားသည်။
CoinGecko မှအချက်အလက်များအရ UNI သည် စာရေးချိန်တွင် $5.18 ဖြင့်ထိုင်ရန်လွန်ခဲ့သည့်ခုနစ်ရက်အတွင်း 17.4% ကို စုပ်ယူခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ဝယ်ယူမှုများ၊ NFT စျေးကွက်စုစည်းမှု Genie နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း၏ သမ္မတဟောင်း Stacey Cunningham အား ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ Uniswap Labs မှ အကြံပေးတစ်ဦး ဒါကို အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်။
Uniswap သည် လက်ရှိဝက်ဝံဈေးကွက်ရှိနေသော်လည်း ဒေတာများသည် DeFi ပလပ်ဖောင်းများစွာအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဝယ်လိုအားကို ပြသနေသောကြောင့် ၎င်း၏အခကြေးငွေနှင့် တိုကင်စျေးနှုန်းများ နောက်ကျခြင်းကို မြင့်တက်စေရန် တစ်ခုတည်းသောပလပ်ဖောင်းမဟုတ်ပါ။
အထူးသဖြင့် ငွေချေးခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကော AAVE နှင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်း Synthetix တို့သည် $981,883 နှင့် $600,214 တို့ဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ခုနှစ်ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ခဲ့သော ပျမ်းမျှအခကြေးငွေအရ တတိယနှင့် ပဉ္စမအဆင့်တွင် ရှိနေပါသည်။
Uniswap ကဲ့သို့ပင်၊ AAVE သည် ၎င်း၏စုစုပေါင်း 69% မှ $1.44 သန်းအထိ တိုးလာသောကြောင့် ဇွန်လ 15 ရက်နေ့တွင် အခကြေးငွေများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ မူရင်း တိုကင် AAVE သည်လည်း ထိုအချိန်မှစ၍ 22% အား စုပ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။
Sythenix ၏ မြင့်တက်လာမှုသည် အသိသာဆုံးဖြစ်သည်။. ကိန်းဂဏန်းသည် $843,297 အထိ မြင့်တက်လာသောကြောင့် အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည် ဇွန် 11 နှင့် ဇွန်လ 13 ရက်ကြားတွင် ပေးဆောင်သည့် အခကြေးငွေ 928% တိုးလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် စုစုပေါင်း အခကြေးငွေသည် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖျင်း $400,000 သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ဇွန်လ 19 ရက်နေ့တွင် နောက်ထပ် 150% သို့ အကြမ်းဖျင်း $1 သန်းအထိ တိုးသွားခဲ့သည်။
စာရေးချိန်တွင် $3.08 ဖြင့် ဇွန်လ 19 ရက်နေ့ကတည်းက 105% တက်လာသည့် Synthetix ၏ မူရင်းပိုင်ဆိုင်မှု SNX ကို လေ့လာခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှုကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းနောက်ကွယ်မှ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ Synthetix Improvement Proposal 120 မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပုံရသည်။ အသက်ရှင် သုံးစွဲသူများအား အခကြေးငွေပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမပြုဘဲ အက်တမ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လဲလှယ်နိုင်စေသည့် နောက်ဆုံးအပတ်တွင် အသုံးပြုသူများအား ကုန်သွယ်မှုအရှိန်ကို တိုးမြှင့်စေသည်။
သို့သော် ဤလမ်းကြောင်းကို လိုက်၍ ချေးငွေထုတ်ချေးသည့် ပလပ်ဖောင်း Compound တွင် အခကြေးငွေများသည် ဧပြီလကတည်းက ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ၎င်း၏ မူရင်းတိုကင် COMP သည် ထိုအချိန်ဘောင်အတွင်း $40.50 တွင် 16.7% တိုးလာသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ခုနစ်ရက်တာ ပျမ်းမျှ ပျမ်းမျှ $11,753 ကို ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
Hump ​​Day တွင် နှစ်ရက်ကြာအနိုင်ရရှိခြင်းစထရိအဆုံးသတ်သွားသည့်အတွက် ETH Down – စျေးကွက်မွမ်းမံမှုများ Bitcoin သတင်း